Kunqande ukukopela kwaye ubeke umsebenzi wakho kukhuseleko olulungileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungayenza ngantoni indlela khusela umsebenzi owuvelisayo? Ungabathintela njani abanye babaqeqeshi abakhuphisanayo ekubeni bathathe indawo ukufumana okungcono kuyo okanye ugcine imali yomsebenzi othile owenze ngokuqinisekileyo emva kokusebenza nzima? Sukujonga phambili, emva koko siza kukuxelela.
Kukho iindlela ezithile ezilula zokwenza thintela umsebenzi wakho ekubeni ukhutshelweNangona kunjalo, eyona ndlela yokwenza oku ukubhalisa iprojekthi yakho kumaziko ahlukeneyo anegunya lokuqinisekisa ukuba umsebenzi othile ngowabo.
1 Ungakuphepha njani ukukopa?
2 Ikhontrakthi yenkonzo
3 Ukutshintshiselana nge-imeyile kunye nembali yokuncokola
5 Ulwazi lwefayile kwiwindows yolwazi lwe-Illustrator
Ungakuphepha njani ukukopa?
Ngokwesiqhelo xa bhalisa iiprojekthi zakho kule klasi yezinto eziphilayo, Utyalo-mali olukhulu luyimfuneko kwaye ngesiqhelo kufuna ixesha elide lokulufezekisa, ngenxa yephepha, nangona kunjalo, kuvela ukuba eyona ndlela ukuba ufuna ukuqinisekisa nokukhusela ilungelo lobunikazi kwiiprojekthi zakho ngokufanelekileyo.
Usenokuzibuza ukuba ngaba kufanelekile ukuba uwenzile onke amaphepha kwaye yenza onke amaxwebhu ukukhusela umsebenzi wakho kwaye impendulo nguewe, nangona ngokuqinisekileyo ayingabo bonke abantu, okanye endaweni yoko zonke iiprojekthi, ezifuna eli nqanaba lokhuseleko. Kucetyiswa kakhulu ukuba uyenze kunye nezo iiprojekthi okanye uphawu olunamandla amakhulu.
Nangona kunjalo kwaye kwezo meko apho ayifuneki okanye awunamdla ekuqinisekiseni ukhuseleko lweeprojekthi ezithile, unokhetho lokukhetha indlela ethile yokuziphatha okanye ukusebenzisa ezinye iindlela, eziyilelwe nazo kukunceda ukhusele ilungelo lobunikazi lomsebenzi wakho, ukuba umntu ugqibe ekubeni ayikhuphele.
Kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba ezinye iindlela zezona zilinge lokwenza yenza ubungqina obaneleyo Ingasetyenziselwa inkqubo enokubakho, apho kwenziwa iinzame zokuqinisekisa ukuba kukho ukukopa, nako nako ayiqinisekisi ukuba iya kwamkelwa Phambi kwejaji, nangona kunjalo, ikuvumela ukuba ube nezixhobo ezoneleyo zokuzama ukungqina ukuba umsebenzi ngowakho, ke apha sikuxelela into ekufuneka uyenzile kwezi ndidi zamatyala:
El Ikhontrakthi yenkonzo, Siqulathe isixhobo esisemthethweni esinokusetyenziswa njengobungqina ukunceda ukubonisa ukuba iprojekthi okanye umsebenzi ngowakho kwaye ulixhoba lokukopela.
Ukutshintshiselana nge-imeyile kunye nembali yokuncokola
Ii-imeyile kunye nemiyalezo ziyavela zibe bubungqina obusemthethweni, ukuba nje zikuvumela ukuba ubone ngokuchanekileyo ngaliphi ixesha izihlomelo zatshintshisanayo kunye nemifanekiso engqina ukuba umsebenzi ukhutshiwe.
Phantse konke ukuhlela iiapps Bavumela abasebenzisi babo ukuba bongeze imethadatha, eyajika ibe yenye indlela yokuthintela ukukopa, kuya kufuneka ukongeza imethadatha kwezi fayile zikwikhompyuter yakho.
Umzekelo woku Umzekeliso, usetyenziso apho kufuneka ufikelele kwiFayile kuphela, emva koko ucofe kwimenyu yolwazi lweFayile emva koko unokufikelela kwifestile ekuvumela ukuba ungeze ulwazi Malunga nombhali womsebenzi, inkcazo yawo kwaye ikwavumela ukwabiwa kwamaphepha-mvume okushicilela.
Ngokukwanjalo, imethadatha bonisa umhla wokudalwa okufanayo kunye notshintsho lokugqibela olwenziwe kwiifayile, luvumela ukuba luboniswe ukuba ngaba kukho ukukopa kwiprojekthi.
Ulwazi lwefayile kwiwindows yolwazi lwe-Illustrator
Ngendlela efanayo ungayisebenzisa iipropathi zewindows Ukuba unenkqubo oyisebenzisayo kwaye unokusebenzisa ezinye iinkqubo ezithile ukongeza imethadatha, nangona ngelishwa, imethadatha ingasuswa ngokululaNangona kunjalo, ulwazi olukwifayile luhlala luphelele, lungasetyenziselwa ukubonisa ukuba umsebenzi ngowakho kwaye umntu othile uzame ukukhuphela okanye ukukhuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Inokuthintelwa njani into yokukopa
MONSERRAT AGUILERA ARELLANO sitsho
Ndicinga ukuba kulungile kakhulu ukuba kukho loo maxwebhu avumela ukukhusela iprojekthi ngokuchasene nokukopela kunye nokusetyenziswa kwe-Illuatrator
Phendula MONSERRAT AGUILERA ARELLANO